Fitaterana : rahonan’ny FTAR ny taxi te hanara-dalàna | NewsMada
Fitaterana : rahonan’ny FTAR ny taxi te hanara-dalàna
Nihaona tamin’ny tompon’andraikitry ny tanànan’Antananarivo sy ireo olom-boafidy sasantsasany eto Antananarivo ary ny mpiara-miasa akaiky amin’ny ben’ny Tanàna omaly tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely ireo mpamily taxi vonona hiara-hiasa sy hanaraka ny fandaminan’ny CUA.
Nilaza ireo mpitondra taxi ireo fa tsapany sady hitan’ny masony ny tolotra omen’ny Omavet amin’ny « visite de conformité » ka naharesy lahatra azy ireo. Nilaza ny mpamily fiarakaretsaka tonga nifampidinika fa rahonan’ny FTAR ny naman’izy ireo.
Izany FTAR izany anefa tsy mahasolo tena velively ny taxi rehetra eto Antananarvo Renivohitra. Ankoatra izay, nanome toky ireo mpamily taxi ny tale jeneralin’ny Omavet Rabezandry fa hiezaka hanome tolotra tsara. Tsy misy koa ny fanilikilihana.
Fantatra fa mbola hisy ny fihaonambe iarahan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny fianakaviamben’ny taxi etsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely anio. Tsiahivina fa tonga teny amin’ny foiben’ny Omavet Nanisana ny talata teo, ireo solontenan’ ny mpamily taxi maromaro nidinidinika niaraka tamin’ny tale jeneralin’ny Omavet talohan’ity fihaonana teny amin’ny lapan’ny Tanàna ity.
Naka toky ny mpamily taxi fa hanafoana tokoa ireo tsy ara-dalàna ny fisian’ity Omavet ity. Ialana amin’ny risoriso ihany koa. Ankoatra izany ny fanamboarana fiara amin’ny vidiny mirary sy vidina kojakoja mora.
Nohamafisina fa fa 5 000 Ar ihany ny saran’ny fitsirihana ny fiara ary 3 000 Ar kosa ny HTH izay toy ny teny Antsakaviro ihany.